Galantamine Hydrobromide: Ezi Ọgwụ Maka Ọrịa Alzheimer - Phcoker
Galantamine Hydrobromide nyocha
Galantamine hydrobromide bụ ọgwụ ọgwụ edere iji gwọọ ọrịa mgbaka nke ọrịa Alzheimer. Galantamine bu ụzọ nweta ya site na snowdrop osisi Galantus spp. The galantamine emeju bụ Otú ọ dị a tertiary alkaloid nke na ya na synthesized.
Ọ bụ ezie na amataghị ihe kpatara nsogbu Alzheimer, a maara na ndị mmadụ na-arịa ọrịa Alzheimer nwere ọ̀tụ̀tụ̀ dị ala nke kemikal acetylcholine dị na ụbụrụ ha. Acetylcholine nwere njikọ na arụ ọrụ uche gụnyere nchekwa, mmụta na nkwukọrịta n’etiti ndị ọzọ. Mbelata nke a chemical (acetylcholine) e metụtara na mgbaka nke Ọrịa Alzheimer.
Galantamine na-erite uru nke ndị ọrịa nke ọrịa Alzheimer n'ihi usoro ọrụ ya abụọ. Ọ na-arụ ọrụ site n'ịbawanye ogo acetylcholine n'ụzọ abụọ. Otu bụ site na igbochi mmebi nke acetylcholine na nke ọzọ bụ site na ngwakọta allosteric nke ndị na-anabata nicotinic acetylcholine. Usoro abụọ a na - enyere aka mee ka enzyme, acetylcholine mụbaa.
Ọ bụ ezie na ọ nwere ike belata mgbaàmà nke ọrịa Alzheimer, galantamine hydrobromide abụghị ọgwụgwọ zuru oke nke ọrịa Alzheimer ebe ọ bụ na ọ naghị emetụta isi ihe kpatara ọrịa ahụ.
Ewezuga uru galantamine nke ịgwọ mgbaàmà nke ọrịa Alzheimer, e jikọtara galantamine na nrọ dị mma. Galantamine na nrọ dị egwu bụ mkpakọrịta nke ndị ọrụ ọ bụla kọọrọ. Iji mezuo nke a galantamine na-ewe obere oge n'etiti ụra gị dịka ọmụmaatụ mgbe ụra 30 nkeji. Fọdụ ndị na-ahụ maka ahụike ga-agba galantamine na uru na-arọ nrọ uru site na usoro nlekọta iji zere mmetụta ndị na-enweghị isi.
Ihe mgbakwunye Galantamine na-eme n'ụdị mbadamba, ihe ngwọta ọnụ yana kapusị nwere mgbapụta. A na-ewerekarị ya na nri na ị drinkingụ ọtụtụ mmiri iji zere mmetụta ndị na-achọghị.
Mmetụta mmetụta ndị ọzọ nke galantamine gụnyere ọgbụgbọ, ọgbụgbọ, isi ọwụwa, ahụ erughị ala afọ ma ọ bụ ihe mgbu, adịghị ike ahụ ike, dizziness, ụra na afọ ọsịsa. Mmetụta utịp galantamine hydrobromide ndị a na-adịkarị nwayọọ ma na-eme mgbe ịmalitere ị thisụ ọgwụ a. Ha nwere ike ịkwụsị oge na-adịghị anya, agbanyeghị ma ọ bụrụ na ha apụghị ịkpọtụrụ dọkịta gị. Enwekwara ụfọdụ mmetụta dị egwu ma dị egwu nke nwere ike ibute dị ka nsogbu iku ume, mgbu obi, oke mgbu afọ, nsogbu urination, ọdịdọ, ịda mba n'etiti ndị ọzọ.
1） Gini bu Galantamine Hydrobromide?
Galantamine hydrobromide bụ ọgwụ ọgwụ edere iji na-emeso nwayọọ ma ọ bụ agafeghị oke nsogbu metụtara ọrịa Alzheimer. Ọrịa Alzheimer bụ nsogbu ụbụrụ nke na-ebibi ebe nchekwa na ike iche echiche, mmụta, nkwukọrịta na ike ịrụ ọrụ ụbọchị.
The galantamine hydrobromide ọgwụ nwere ike ghara ịgwọ ọrịa Alzheimer nwere ọganihu mana enwere ike iji ya na ọgwụ ndị ọzọ Alzheimer.
Ọ na-adị n'ụdị atọ dị iche iche nwere ike dị iche iche. Galadị galantamine bụ azịza ọnụ, mbadamba na capsules na-agbatị agbatị.
2） Gini mere eji eme ya? onye kwesịrị ị takeụ ọgwụ a?
A na-eji Galantamine hydrobromide na-emeso ihe mgbaàmà dị nro na nke agafeghị oke nke ọrịa Alzheimer. Galantamine hydrobromide egosighi maka ọgwụgwọ ọrịa Alzheimer n'ihi na ọ naghị emetụta usoro mmebi iwu nke ọrịa ahụ.
Galantamine hydrobromide egosiri maka ndi mmadu nwere oria di ala rue ala nke oria Alzheimer.
3） Olee otu o si aru oru?
Galantamine nọ na klas nke ọgwụ ndị a na-akpọ ndị na-emechi acetylcholinesterase.
Galantamine na-arụ ọrụ iji mụbaa ọnụọgụ enzyme, acetylcholine na ụzọ abụọ. Nke mbụ ọ na - eme dị ka onye na - eme mgbanwe na asọmpi acetylcholinesterase inhibitor si otú a na - egbochi nkwụsị nke acetylcholine na ụbụrụ. Nke abuo, ọ na - emekwa ka ndị na - anabata nicotinic dị n'ụbụrụ wepụta ọtụtụ acetylcholine.
Nke a na-ewelite ọnụọgụ nke acetylcholine n'ụbụrụ, nke nwere ike inye aka belata mgbaàmà ndị metụtara mgbaka.
Galantamine nwere ike inye aka mee ka ikike iche echiche na ụdị dị mma na ebe nchekwa nakwa na-eme ka a gharazie inwe mmetụta uche nke ndị ọrịa na-arịa ọrịa Alzheimer.
Galantamine Hydrobromide bara uru na Alzheimer's ọrịa
Ọrịa Alzheimer na-eme ka mkpụrụ ndụ ụbụrụ mebie ma mesịa nwụọ. Achọpụtaghị ihe kpatara ya n'ezie mana ọrịa a na-aga n'ihu na-eduga n'ịbelata ọrụ ntụgharị uche dịka na ebe nchekwa, mmụta, echiche na ikike ịrụ ọrụ ụbọchị. Ihe a maara banyere ọrịa nke ọrịa Alzheimer bụ ọkwa dị ala nke kemịkal acetylcholine.
Galantamine na-eji na-agwọ ihe mgbaàmà nke mgbaka metụtara ọrịa Alzheimer na-erukwa n'ihi ọnọdụ ya abụọ. ọ enwekwu larịị nke acetylcholine, a isi enzyme na cognitive nkwalite. Galantamine na-eme dị ka onye na-eme mgbanwe na asọmpi acetylcholinesterase inhibitor si otú a gbochie mmebi nke acetylcholine. Ọ na - akpalikwa ndị na - anabata nicotinic ka ịhapụkwuo acetylcholine.
Uru Ndị Ọzọ Ga-abara Gị
(1) Aha nnabata Antioxidant
A maara nrụgide Oxidative bụ ihe kpatara ọtụtụ nsogbu nhụjuanya dị ka ọrịa Parkinson, ọrịa Alzheimer, ọrịa shuga, na ndị ọzọ. Ọ na-adịkarị na afọ ndụ mana mgbe enweghị nha anya n'etiti ndị na-enweghị onwe ha na antioxidants, mmebi anụ ahụ nwere ike ime.
Galantamine a maara scavenge reactive oxygen umu na awade nchedo nke akwara ozi site na igbochi akwara ozi mmebi site oxidative nchegbu. Galantamine nwekwara ike belata mmepụta nke nnabata oxygen na-arụ ọrụ site na ịbawanye ogo nke acetylcholine.
(2) Ọgwụ nje
Galantamine na-egosipụta ọrụ antibacterial.
Kedu otu esi ewere ọgwụ a?
m. Tupu ị takingụ Galantamine hydrobromide
Dị ka ọgwụ ndị ọzọ ọ bụ ihe amamihe dị na ya iji kpachara anya dị mkpa tupu ị na-ewere galantamine hydrobromide.
Mee ka dọkịta gị mara ma galantamine ọ na-arịa ya ma ọ bụ nke ọ bụla n’ime ha anaghị arụ ọrụ.
Egosipụta ọgwụ niile ị na - ewere ugbu a gụnyere ọgwụ ndị enyere gị, ọgwụ ị na - ere ọgwụ, ọgwụ ọgwụ ahịhịa ma ọ bụ ngwaahịa ahụike ọ bụla.
Ọ dị mma ịgwa dọkịta gị ọnọdụ ndị ọzọ ị na-arịa gụnyere;
Ụkwara ume ọkụ,
Nnukwu mgbu mgbu,
Buru ibu prostate,
Ọrụ na nso nso a karịsịa na afo ma ọ bụ eriri afo.
Ekwesịrị ịgwa onye na-ahụ maka ahụike gị ma ị dị ime ma ọ bụ ime atụmatụ ịtụrụ ime yana ma ị na-enye ara ara. Ọ bụrụ na ị tụrụ ime mgbe ị na-a supplementụ ọgwụ mgbakwunye galantamine, ị ga-agwa dọkịta gị n'oge na-adịghị anya.
Ọ dị mkpa ịgwa dọkịta gị na ị na-ewere galantamine tupu ịwa ahụ ọ bụla gụnyere ịwa ahụ eze.
Galantamine hydrobromide mmetụta gunyere ura. Should ga - ezere ịkwọ ụgbọala na igwe ọrụ.
Galaụ galantamine na mmanya na-aba n'anya nwere ike ime ka ụra ghara ịba ụba nke ọma.
ii. Ngwadogwu akwadoro
(1) Dementia nke Alzheimer kpatara's ọrịa
Galantamine hydrobromide maka ịgwọ ọrịa Alzheimer na-eme n'ụdị ọ bụla yana aha aha galantamine dị ka Razadyne nke a na-akpọbu Reminyl.
Galantamine hydrobromide na-eme n'ụdị atọ nwere ike dị iche iche. Mbadamba ụrọ dị na 4 mg, 8 mg na 12 mg mbadamba. A na-ere ihe ngwọta ọnụ na ntinye nke 4mg / ml na n'ọtụtụ ọnọdụ na karama 100 ml. Enwere ọnụ capsule a na-agbakwunye agbatị 8 mg, 16 mg na 24 mg mbadamba.
Ọ bụ ezie na a na-eji mbadamba ụrọ na ọgwụ ọnụ eme ihe ugboro abụọ kwa ụbọchị ka a na-ewere capsule na-ebu ọnụ otu ugboro kwa ụbọchị.
Mmalite usoro ọgwụgwọ galantamine maka ụdị ndị a na-eme (mbadamba ụrọ na ọnụ ọnụ ọnụ) bụ 4 mg ugboro abụọ kwa ụbọchị. A ga-ewere ọgwụ ahụ na nri ụtụtụ gị na mgbede.
Maka capsule a na-agbatị agbatị, usoro mbụ a tụrụ aro bụ 8 mg kwa ụbọchị na-eri nri ụtụtụ. A ghaghị iwere capsule a na-agbatị agbatị iji mee ka ọgwụ kwụsị ngwa ngwa kwa ụbọchị. Ya mere, egbula ma ọ bụ bepụ capsule ahụ.
N'ihi na a mmezi onunu ogwu dabere na gị ndidi na galantamine na ot ụdị kwesịrị iwere na 4 mg ma ọ bụ 6 mg ugboro abụọ kwa ụbọchị na-abawanye nke 4 mg ọ bụla 12 awa ọ dịkarịa ala 4 izu 'nkeji.
A ghaghị ịnọgide na-enwe Capsule a na-agbatị agbatị na 16-24 mg kwa ụbọchị na mmụba nke 8 mg na oge izu 4.
Fọdụ echiche dị mkpa mgbe ị na-ewere galantamine
Were galantamine na-eri nri gị na oke mmiri. Nke a ga - enyere aka izere mmetụta ndị na - achọghị galantamine.
Ọ dị mma ị takeụ ọgwụ ọgwụ galantamine a tụrụ aro na ihe dịka otu oge kwa ụbọchị. Ọ bụrụ na ị na-atụ uche ọgwụ, were ya ozugbo ị chetara ma ọ bụrụ na usoro ọzọ adịghị nso. Ma ọ bụghị mee ka ọgwụ ahụ daa ma nọgide na usoro ihe omume gị. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị na-atụ uche ọgwụ gị maka ụbọchị 3, kpọọ dọkịta gị nwere ike inye gị ndụmọdụ ka ịmalite ọgwụ gị.
Dabere na ebumnuche ahụ, dọkịta gị nwere ike ịhazie usoro gị dabere na ịbawanye ya na opekempe nke izu 4. Adịghị edozi onwe gị usoro ọgwụgwọ galantamine.
Ọ bụrụ na enyere gị capsule a gbatịrị agbatị, kpachara anya ilo ya dum na-ata ma ọ bụ na-akụpịa ya. Nke a bụ n'ihi na a gbanwere mbadamba nkume ahụ iji hapụ ọgwụ ahụ nwayọ nwayọ n'ụbọchị.
Maka ndenye ọgwụ ọnụ, na-agbaso ndụmọdụ a nyere mgbe niile ma tinye naanị ọgwụ ahụ na mmanya na-egbu egbu nke kwesịrị ị whichụ ozugbo.
(2) Okenye ndị okenye (afọ 18 na okenye)
Capsule a na-agbatị agbatị nwere usoro 8 mg nke a na-ewere otu ugboro kwa ụtụtụ. Onye na-ahụ maka ahụike gị nwere ike ịhazigharị ọgwụ gị site na ịbawanye ya na 8 mg kwa ụbọchị mgbe opekata mpe izu 4. Maka mmezi ị kwesịrị ị na-ewere 16-24 mg kwa ụbọchị dịka dọkịta gị gwara gị.
Maka ngwa ngwa ịhapụ ngwa ngwa, ntinye mmalite bụ 4 mg were ugboro abụọ kwa ụbọchị na nri ya mere 8 mg kwa ụbọchị. Dọkịta gị nwere ike ịgbatị dose ahụ site na 4 mg kwa ụbọchị mgbe opekempe nke izu 4 gachara.
(3) Ddị ụmụaka (afọ 0-17)
Galantamine hydrobromide utịp na-amụghị na ụmụaka (afọ 0-17 afọ), ọ kwesịrị ya mere a ga-eji ndị dọkịta na ndụmọdụ.
iii. Kedu ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na ewere ịdoụbiga mmanya ókè?
Ọ bụrụ na gị ma ọ bụ ndị ọrịa ị na-enyocha na-ewe oke nke galantamine dose, ị kwesịrị ịkpọ dọkịta gị ma ọ bụ ụlọ ọrụ nchịkwa nsị ozugbo. Nwere ike ịga ngwa ngwa kacha nso nso nso.
Ihe mgbaàmà ndị a na-ejikọkarị na galantamine ịdoụbiga mmanya ókè bụ oké ọgbụgbọ, ọsụsọ, oke afọ na-eme ka iku ume na-eku ume, mọzụlụ na-agbagọ ma ọ bụ adịghị ike, njigide, ịda mba, obi mgbawa na nsogbu mgbe ị na-amị.
Dọkịta nwere ike inye gị ọgwụ ụfọdụ dị ka atropine iji gbanwee mmetụta mmetụta galantamine metụtara ịdụbiga mmanya ókè.
Gịnị bụ mmetụta mmetụta metụtara na iji Galantamine hydrobromide?
Ọ bụ ezie na galantamine hydrobromide na-enye ndị na-arịa ọrịa Alzheimer uru ahụ ike, enwere ike inwe mmetụta ụfọdụ galantamine achọghị. Enwere galantamine mmetụta dị n'akụkụ nke ahụ nwere ike ọ nwere ike ọ bụghị mmadụ niile nwere ike ihu ha.
Mmetụta kachasị emetụta nke ị nwere ike ịnwe iji galantamine bụ;
A na-ahụkarị ihe mgbaàmà ndị a mgbe ị malitere ị galaụ galantamine ma ọ na-adịkarị nwayọọ ma nwee ike ịkwụsị iji ọgwụ ahụ eme ihe. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ha adigide ma ọ bụ sie ike jide n’aka ịkpọ dọkịta gị maka ndụmọdụ ọkachamara.
Peoplefọdụ ndị mmadụ nwere ike ịnwe nsogbu dị egwu. Mmetụta ndị a adịghị njọ ma ị ga-akpọ dọkịta gị ozugbo ị hụrụ ha.
Mmetụta dị egwu gụnyere:
Nnukwu ihe nfụkasị ahụ ọkụ anụ ahụ, ọkọ na mgbe ụfọdụ ọzịza nke ihu, akpịrị ma ọ bụ ire.
ihe mgbaàmà nke ngọngọ atrioventricular gụnyere nwayọ nwayọ obi, ike ọgwụgwụ, nju-anya na ndapụ
ọnya afọ na ọbara ọgbụgba
Vomits nke ọbara ma ọ bụ dị ka kọfị kọfị
Ọganihu nke nsogbu ngụgụ na ndị nwere ụkwara ume ọkụ ma ọ bụ ọrịa akpa ume ndị ọzọ
oké afo / afo mgbu
ọbara na mmamịrị
ọkụ sensation ma ọ bụ ihe mgbu n'oge urination
ụfọdụ post ahịa galantamine akụkụ-mmetụta na a kọrọ gụnyere;
ọdịdọ / nkwonkwo ma ọ bụ dabara
tinnitus (na-akụ na ntị)
atrioventricular ngọngọ ma ọ bụ obi zuru ezu ngọngọ
bulie umeji enzyme
acha uhie uhie ma ọ bụ odo odo (erythema multiforme).
Nke a bụ ndepụta ọtụtụ anaghị enwe mmetụta niile galantamine. Ya mere, ọ ga-adị mma ma ị kpọọ dọkịta gị ma ọ bụrụ na ịnwee mmetụta dị iche iche mgbe ị na-a drugụ ọgwụ a.
Kedu ụdị ọgwụ na-emekọrịta ihe na galantamine hydrobromide?
Mkpakọrịta ọgwụ na-ezo aka n'ụzọ ụfọdụ ọgwụ ọjọọ si emetụta ndị ọzọ. Mkparịta ụka ndị a na-emetụta ụzọ ụfọdụ ọgwụ si arụ ọrụ ma nwee ike ime ka ọ ghara ịdị irè ma ọ bụ ọbụna mee ka nsogbu nke mmetụta ndị ọzọ pụta.
E nwere mara galantamine hydrobromide mmekọrịta ya na ogwu ndi ozo. Dọkịta gị nwere ike ịmaralarị mmekọrịta mmekọrịta ọgwụ ụfọdụ. Onye na-ahụ maka ahụike gị nwere ike ịgbanwe ụfọdụ usoro gị iji belata ohere nke mmekọrịta mmekọrịta ọgwụ ma ọ bụ nwekwara ike gbanwee ọgwụ ahụ kpamkpam. O nwere ike ịba uru maka ịnye ọgwụ na ọkachasị ndenye ọgwụ sitere n'otu ụzọ dịka ahịa ọgwụ maka njikọta kwesịrị ekwesị.
Debekwa ndepụta nke ọgwụ ị na-ewere ma gosipụta ozi a na onye na-elekọta ahụike gị tupu ọgwụ ọ bụla.
Offọdụ n'ime mmekọrịta nke galantamine hydrobromide bụ;
Mmekọrịta na ndị na-egbochi ịda mba
A na-eji ọgwụ ndị a agwọ ịda mbà n'obi ma nwee ike imetụta otu galantamine si arụ ọrụ na-eme ka ọ ghara ịdị irè. Ọgwụ ndị a gụnyere amitriptyline, desipramine, nortriptyline na doxepin.
Mmekọrịta na ọgwụ eji agwọ ọrịa
Ọgwụ ndị a na-arịa ọrịa nwere ike imetụta ụzọ galantamine si arụ ọrụ.
Ọgwụ ndị a gụnyere chlorpheniramine, hydroxyzine na diphenhydramine.
Mmekọrịta na ọgwụ ọgwụ ngagharị
Ọgwụ ndị a na-emetụta ọrụ galantamine hydrobromide.
Ọgwụ ndị a gụnyere dimenhydrinate na meclizine.
Ọgwụ ndị ahụ na-arụ ọrụ dịka galantamine hydrobromide. Mgbe a na-ejikọ ọgwụ ndị a ọnụ, ha nwere ike ịbawanye n'ihe egwu gị nke ịnwe mmetụta dị n'akụkụ nke galantamine. Ọgwụ ndị a gụnyere donepezil na rivastigmine.
Agbanyeghị, enwere ike ịme ụfọdụ nsonaazụ synergetic site na njikọta ụfọdụ.
A na-eji Galantamine na memantine agwọ ọrịa Alzheimer. Ọ bụ ezie na Galantamine bụ acetylcholinesterase inhibitor memantine bụ onye nnabata NMDA na-emegide ya.
Mgbe ị na-ewere galantamine na memantine ọnụ, ị ga-enwe mmelite mmetụ ka mma karịa mgbe ị na-eji galantamine naanị.
Otú ọ dị, ụfọdụ ọmụmụ ndị mbụ enwetabeghị ọganihu dị ukwuu na nghọta mgbe ejiri galantamine na memantine mee ihe.
Mmekọrịta na ọgwụ ọjọọ maka eriri afọ overactive
Ọgwụ ndị a na-emetụta etu galantamine si arụ ọrụ. Ọ bụrụ na ị na-ejikọ ọnụ, ị gaghị aghọrọ galantamine. Ọgwụ ndị a gụnyere darifenacin, tolterodine, oxybutynin na trospium.
Ọgwụ ndị a gụnyere dicyclomine, loperamide na hyoscyamine. Ha nwere ike imetụta otu galantamine si arụ ọrụ.
Galantamine na ọgwụ autism
Mgbe a na-eji galantamine na ọgwụ autism dịka risperidone ọnụ. A kọọrọ ya iji melite ụfọdụ mgbaàmà nke autism dị ka mgbakasị, ike ọgwụgwụ, na nkwụsị nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya
Ebee ka anyị ga-enweta ngwaahịa a?
Galantamine hydrobromide nwere ike isite n'aka ndị na-ere ọgwụ na mpaghara gị ma ọ bụ site na ụlọ ahịa n'ịntanetị. Ahịa nke galantamine ịzụta sitere n'aka onye dibia ogwu anabatara nwere ike inye ọgwụ. Ọ bụrụ n ’ịtụle galantamine zụta ya n’aka ụlọ ọrụ ndị nwere aha ọma ma jiri ya dịka ndị ọrụ nlekọta ahụike siri nye gị.
Galantamine bụ ezigbo ọgwụ ederede iji gwọọ mgbaàmà nke isi mgbaka metụtara Alzheimer's ọrịa. Otú ọ dị, ọ bụghị ọgwụgwọ maka ọrịa ahụ ebe ọ naghị ewepụ usoro kpatara ọrịa Alzheimer.
Ekwesịrị iji ya dị ka akụrụngwa na ọgwụgwọ ọrịa Alzheimer tinyere usoro ndị ọzọ. Ọ bụ ezigbo mgbakwunye maka usoro ya abụọ nke ịba ụba acetylcholine na ụbụrụ. Ọ na-enyekwu abamuru na nchebe nke akwara site na igbochi nrụgide oxidative.
Nnenna Onyekwere Lilienfeld S. Gaens E. nrụpụta ọrụ na nchekwa nke galantamine na ndị ọrịa nwere ọrịa Alzheimer dị nwayọọ. 2000; 321: 1445-1449.
Lilienfeld, S., & Parys, W. (2000). Galantamine: uru ndị ọzọ baara ndị ọrịa nwere ọrịa Alzheimer. Nsogbu uche na nsogbu geriatric, 11 Suppl 1, 19–27. https://doi.org/10.1159/000051228.
Tsvetkova, D., Obreshkova, D., Zheleva-Dimitrova, D., & & Nzuzo, L. (2013). Ọrụ antioxidant nke galantamine na ụfọdụ ihe ndị sitere na ya. Onwu onwu ogwu ugbu a, 20(36), 4595–4608. https://doi.org/10.2174/09298673113209990148.
Loy, C., & Schneider, L. (2006). Galantamine maka ọrịa Alzheimer na mmerụ ahụ dị nro. Ihe nchekwa data Cochrane nke nyocha usoro, (1), CD001747. https://doi.org/10.1002/14651858.CD001747.pub3.
1.Galantamine Hydrobromide nnyocha
3.Galantamine Hydrobromide bara uru na ọrịa Alzheimer
4. Uru ndị ọzọ Ga-abara Gị
5.Otu esi ewere ogwu a?
6.Gịnị bụ mmetụta ndị ọzọ metụtara iji Galantamine hydrobromide eme ihe?
Wdị ọgwụ dị a galaaa na-emekọrịta mmiri hydrontromenti galantamine?
8.Elee ebe anyị nwere ike nweta ngwaahịa a?